အသက်ရှည်ချင်ရင်ရှောင်ရှားရမယ့် အစားအစာတွေ – Trend.com.mm
Posted on June 10, 2018 June 7, 2018 by San Wadi Hnin
အသက်ကလေးရယ်တဲ့ရှည်စေလို…။အသက်ရှည်ချင်ရင်ရှောင်ရှားရမယ့် အစားအစာတွေကိုဖတ်ပြီးရင်သင့်ရင်ထဲမှာကြေကွဲဆို့နစ်သွားနိုင်ပါတယ်။စိတ်မခိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်မျက်ရည်တွေဘာတွေပါဝဲသွားနိုင်ပါသေးတယ်။ဘာလိုိ့ဆို ဒီဘက်ခေတ်မှာလူတွေကြိုက်နှစ်သက်စွာစားသုံးနေကြတဲ့အစားအစာတွေကရှေ့ဆုံးကပါနေလို့ပါပဲ။ဒီလောက်ဆို အရင်ခေတ်ကလူတွေဘာလို့အသက်ရှည်စွာအနာမဲ့ကြောင်း နေထိုင်နေကြပြီး ခုခေတ်လူသားတွေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မပြန်လမ်းကိုကြွမြန်းနေကြသလဲဆိုတာသိကြရောပေါ့။ ဒီတော့ ကိုယ်တွေလည်းအသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင် ကိုယ်တွေသိပ်ချစ်တဲ့အစားအစာတွေကို စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားပြီးလမ်းခွဲစကားပြောရပါတော့မယ်။ ယတိပြတ်ကြီိးလမ်းမခွဲနိုင်သေးရင်တောင် ကန့်သတ်ချက်လေးနဲ့စားသုံးရမှာပေါ့နော်။ အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင် ရှောင်ရှားရမယ့်အစားအစာတွေကတော့ ….
အကင်ဆိုင်တွေမှာရနေတဲ့ အသားပြားတွေ၊ supermarket တွေမှာဝယ်လိုိ့ရတဲ့ အသားပြားတွေ၊အသားချောင်းတွေဟာ တာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။ တာရှည်ခံအစားအစာတွေမှာ လူကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ ဆိုဒီယမ်ပမာဏများစွာပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင် ကြာရှည်ခံအစားအစာတွေနဲ့ဝေးဝေးမှာနေပါတော့။
သကြားအစားထိုးပစ္စည်းတွေကိုအများဆုံးစားသုံးကြတာကတော့ ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူလူကြီးတွေပါ။ သကြားအစားထိုးပစ္စည်းတွေဟာ သကြားထက်ပိုပြီ ကျန်းမာရေးအတွက်လျော်ကန်သင့်မြတ်သလို လူတော်တော်များများကအထင်ရောက်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်တွေအရ သကြားအစားထိုးပစ္စည်းတွေဟာ ဆီးချိုသွေးချိုကို တက်စေတဲ့အပြင် အသည်းကိုပါဒုက္ခပေးစေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် သကြားအစားထိုးပစ္စည်းတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သကြားတောင့်တစိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်တာကြောင့် အခြားသောကျန်းမာရေးပြဿနာများစွာကိုယူဆောင်လာပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာရေးပြဿာနာတွေဖြစ်စေတဲ့ ပြည့်ဝဆီတွေ၊သကြားတွေနဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့် အစာချေစနစ်ကိုကမောက်ကမဖြစ်စေနိုင်ပြီး နှလုံးရောဂါတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေက လူကိုဝက်ခြံတွေလည်းပေါက်စေနိုင်သလို ဆီးချိုသွေးချိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်အလေးချိန်လည်းအလွယ်တကူတက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်ရှည်စွာအနာမဲ့ကြောင်းအေးအေးလူလူနေချင်တယ်ဆိုရင် နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကိုအလွန်အကျွံမသုံးဆောင်မိအောင် သတိထားရပါမယ်။
Pop,Coke, စသဖြင့် ဘယ်လိုပဲနာမည်လှလှတွေပေးထားထားတကယ်တမ်းသူတို့ပေးစွမ်းတာကတော့ ဆိုဒါပါတဲ့အချိုရည်တွေပါ။ အချိုရည်သောက်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့ ရေ၊ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ သကြားကိုဖျော်စပ်ထားတဲ့အရည်တွေကိုသောက်နေကြခြင်းပါပဲ။ဒါကြောင့် အချိုရည်တွေဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းစေတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့မဟုတ်တာအမှန်ပါပဲ။ အချိုရည်တွေကိုမကြာခဏသောက်သုံးမယ်ဆိုရင် ဆီးချိုရောဂါ၊ဂေါက်ရောဂါ၊ကင်ဆာ၊နှလုံးရောဂါနဲ့ အဝလွန်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းရင်တစ်ခုတည်းဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးကံဆိုးရင်တော့ရောဂါပေါင်းစုံပြုံပြီးဖြစ်မှာပါ။
နာမည်ကြီးဆိုင်တွေကကြက်သားကြော်တွေ၊အကင်ဆိုင်တွေက ပုဇွန်ခွက်ကြော်၊ဘဲအသားလွှာကြော်၊ရေဘဝဲတောက်တောက်ကြော်၊ဝက်စဉ်းကောကြော် (ရေးရင်းနဲ့တောင်စားချင်လာပြီ) စတာတွေကိုအလွန်အကျွံစားသုံးရင်သင့်ကိုအသက်တိုစေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအရာတွေဟာစားလို့ကောင်းသလောက် ပြည့်ဝဆီသိုလှောင်မှုအများပြားဆုံးအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အာလူးချောင်းကြော်တွေလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေကို (အပြတ်ဖြတ်ဖို့ခဲယဉ်းတဲ့အတူတူ) တတ်နုိုင်သမျှနည်းနည်းပဲစားသုံးမိစေဖို့ကြိုးစားရပါတော့မယ်။
အထက်မှာဖော်ပြထားတာတွေကတော့ အသက်ရှည်ချင်ရင်ရှောင်ရှားရမယ့် အစားအစာတွေပါ။ အသက်ကိုညဏ်စောင့်တယ်ဆိုပေမယ့် ပါးစပ်ကိုတော့အရသာကစောင့်တာမို့ ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေဖြစ်လို့ ဝမ်းနည်းစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုနေပေမယ့်် အပြတ်ဖြတ်ဖို့မဟုတ်၊စည်းလေးကမ်းလေးနဲ့စားသုံးဖို့ပါပဲ။မငိုနဲ့တော့နော်။
အသကကြလေးရယတြဲ့ရှညစြလေို…။အသကရြှညခြငွရြငရြှောငရြှားရမယြ့ အစားအစာတှကေိုဖတပြှီးရငသြငြ့ရငထြဲမှာကှကှေဲဆို့နစသြှားနိုငပြါတယြ။စိတမြခိုငတြဲ့သူတှဆေိုရငမြကွရြညတြှဘောတှပေါဝဲသှားနိုငပြါသေးတယြ။ဘာလို့ဆို ဒီဘကခြတမြှောလူတှကှေိုကနြှစသြကစြှာစားသုံးနကှတေဲ့အစားအစာတှကရှေဆေုံ့းကပါနလေို့ပါပဲ။ဒီလောကဆြို အရငခြတကြေလူတှဘောလို့အသကရြှညစြှာအနာမဲ့ကှောငြး နထေိုငနြကှပှေီး ခုခတလြေူသားတှငယေငြယရြှယရြှယနြဲ့ မပှနလြမြးကိုကှမှနြးနကှသေလဲဆိုတာသိကှရောပေါ့။ ဒီတော့ ကိုယတြှလညြေးအသကရြှညရြှညနြခငွေရြငြ ကိုယတြှသေိပခြစွတြဲ့အစားအစာတှကေို စိတခြိုငခြိုငထြားပှီးလမြးခှဲစကားပှောရပါတော့မယြ။ ယတိပှတကြှီိးလမြးမခှဲနိုငသြေးရငတြောငြ ကနြ့သတခြကွလြေးနဲ့စားသုံးရမှာပေါ့နြော။ အသကရြှညရြှညနြခငွေရြငြ ရှောငရြှားရမယြ့အစားအစာတှကတေော့ ….
အကငဆြိုငတြှမှောရနတေဲ့ အသားပှားတှေ၊ supermarket တှမှောဝယလြို့ရတဲ့ အသားပှားတှေ၊အသားခွောငြးတှဟော တာရှညခြံအောငပြှုလုပထြားတဲ့အစားအစာတှဖှစေပြါတယြ။ ဝမြးနညြးစရာပါပဲ။ တာရှညခြံအစားအစာတှမှော လူကိုဒုကျခပေးနိုငတြဲ့ ဆိုဒီယမပြမာဏမွားစှာပါဝငနြပေါတယြ။ဒါကှောငြ့အသကရြှညရြှညနြခငွေရြငြ ကှာရှညခြံအစားအစာတှနေဲ့ဝေးဝေးမှာနပေါတော့။
သကှားအစားထိုးပဈစညြးတှကေိုအမွားဆုံးစားသုံးကှတာကတော့ ဆီးခွိုသှေးခွိုရှိသူလူကှီးတှပေါ။ သကှားအစားထိုးပဈစညြးတှဟော သကှားထကပြိုပှီ ကနြွးမာရေးအတှကလြွောကြနသြငြ့မှတသြလို လူတောတြောမြွားမွားကအထငရြောကနြကှပေါတယြ။ ဒါပမယြေ့ စမြးသပစြစဆြေးခကွတြှအရေ သကှားအစားထိုးပဈစညြးတှဟော ဆီးခွိုသှေးခွိုကို တကစြတေဲ့အပှငြ အသညြးကိုပါဒုကျခပေးစနေိုငကြှောငြးတှရှေိ့ခဲ့ရပါတယြ။ဒါ့အပှငြ သကှားအစားထိုးပဈစညြးတှဟော ခနျဓာကိုယရြဲ့သကှားတောငြ့တစိတကြိုမှငြ့တငပြေးနိုငတြာကှောငြ့ အခှားသောကနြွးမာရေးပှဿနာမွားစှာကိုယူဆောငလြာပေးနိုငပြါသေးတယြ။
နို့နဲ့နို့ထှကပြဈစညြးတှမှော ခနျဓာကိုယကြိုကနြွးမာရေးပှဿာနာတှဖှစေစြတေဲ့ ပှညြ့ဝဆီတှေ၊သကှားတှနေဲ့ ဟောမြုနြးဓာတတြှပေါဝငတြာကှောငြ့ အစာခွစနေစကြိုကမောကကြမဖှစစြနေိုငပြှီး နှလုံးရောဂါတှဖှစေစြနေိုငပြါတယြ။ ဒါတငပြဲလားဆိုတော့မဟုတသြေးပါဘူး။ နို့နဲ့နို့ထှကပြဈစညြးတှကေ လူကိုဝကခြှံတှလညြေးပေါကစြနေိုငသြလို ဆီးခွိုသှေးခွိုလညြးဖှစစြနေိုငပြါတယြ။ ဒါ့အပှငြ ကိုယအြလေးခွိနလြညြးအလှယတြကူတကစြနေိုငပြါတယြ။ဒါကှောငြ့အသကရြှညစြှာအနာမဲ့ကှောငြးအေးအေးလူလူနခငွေတြယဆြိုရငြ နို့နဲ့နို့ထှကပြဈစညြးတှကေိုအလှနအြကွှံမသုံးဆောငမြိအောငြ သတိထားရပါမယြ။
Pop,Coke, စသဖှငြ့ ဘယလြိုပဲနာမညလြှလှတှပေေးထားထားတကယတြမြးသူတို့ပေးစှမြးတာကတော့ ဆိုဒါပါတဲ့အခွိုရညတြှပေါ။ အခွိုရညသြောကတြယဆြိုတာတကယတြော့ ရေ၊ဓာတုပဈစညြးတှနေဲ့ သကှားကိုဖွောစြပထြားတဲ့အရညတြှကေိုသောကနြကှခှေငြးပါပဲ။ဒါကှောငြ့ အခွိုရညတြှဟော ကနြွးမာရေးကောငြးစတေဲ့ပဈစညြးတှတေော့မဟုတတြာအမှနပြါပဲ။ အခွိုရညတြှကေိုမကှာခဏသောကသြုံးမယဆြိုရငြ ဆီးခွိုရောဂါ၊ဂေါကရြောဂါ၊ကငဆြာ၊နှလုံးရောဂါနဲ့ အဝလှနခြှငြးတှကေိုဖှစစြနေိုငပြါတယြ။ ကံကောငြးရငတြစခြုတညြးဖှစမြှာဖှစပြှီးကံဆိုးရငတြော့ရောဂါပေါငြးစုံပှုံပှီးဖှစမြှာပါ။
နာမညကြှီးဆိုငတြှကကှေကသြားကှောတြှေ၊အကငဆြိုငတြှကေ ပုဇှနခြှကကြှြော၊ဘဲအသားလှာကှြော၊ရဘဝေဲတောကတြောကကြှြော၊ဝကစြဉြးကောကှြော (ရေးရငြးနဲ့တောငစြားခငွလြာပှီ) စတာတှကေိုအလှနအြကွှံစားသုံးရငသြငြ့ကိုအသကတြိုစပေါလိမြ့မယြ။ အဲ့ဒီအရာတှဟောစားလို့ကောငြးသလောကြ ပှညြ့ဝဆီသိုလှောငမြှုအမွားပှားဆုံးအရာတှဖှစေပြါတယြ။ အာလူးခွောငြးကှောတြှလညြေးထိုနညြးလညြးကောငြးပါပဲ။ ဒါကှောငြ့ဒီအရာတှကေို (အပှတဖြှတဖြို့ခဲယဉြးတဲ့အတူတူ) တတနြုိုငသြမွှနညြးနညြးပဲစားသုံးမိစဖေို့ကှိုးစားရပါတော့မယြ။
အထကမြှာဖောပြှထားတာတှကတေော့ အသကရြှညခြငွရြငရြှောငရြှားရမယြ့ အစားအစာတှပေါ။ အသကကြိုညဏစြောငြ့တယဆြိုပမယြေ့ ပါးစပကြိုတော့အရသာကစောငြ့တာမို့ ကိုယအြရမြးကှိုကတြဲ့အစားအစာတှဖှစေလြို့ ဝမြးနညြးစိတပြကွဖြို့ကောငြးတယလြို့ဆိုနပမေယြေ့ အပှတဖြှတဖြို့မဟုတြ၊စညြးလေးကမြးလေးနဲ့စားသုံးဖို့ပါပဲ။မငိုနဲ့တော့နြော။
Posted in Food, Lifestyle, Wellbeing